Fihetsiketsehana ara-pientanam-po: Ahoana ny fomba hamantarana, hahatakarana ary hiatrehana ny anao - An-Tsaina
Sahirana amin'ny fitadiavana filaminana sy fahasambarana ve ianao?
Vitsy ny olona manao.
Izao tontolo izao dia feno olona izay tena tsy faly sy mitady fomba tsy tapaka hitondra fahazavana ao amin'ny fiainany.
Ny vaovao sy ny media sosialy dia manamafy ny lafiny maizina sy mahatsiravina amin'ny zanak'olombelona ary sarotra ny fiainana ho an'ny olona maro.
Ampahany manan-danja amin'ny mahita ny fiadananao ary ny fahasambarana dia ny fahatakarana ny antony ahatsapanao ny fomba fanaonao sy ny hifehezana ny fomba hamalianao an'izao tontolo izao.
Betsaka ny olona mandany ny fotoanany amin'ny alahelo amin'ny zavatra izay tsy voafehiny tanteraka. Na, araka ny filazan'i Epictetus azy tsara…
Tsy manelingelina ny zavatra ny olona, ​​fa ny fomba fijery raisiny ho azy ireo.
Ny fiteny iraisan'ny besinimaro ankehitriny dia miantso ny zava-mitranga rehetra izay mampihetsi-po amin'ny fihetseham-po dia 'trigger' na 'trigger' - ary mampalahelo izany.
Mampalahelo satria ny teny hoe trigger, ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po, dia nampiasaina hilazana toe-javatra na toe-javatra mety hiteraka fikorontanana mahatsiravina amin'ny olona iray manana aretina ara-tsaina, korontana, na tsy fetezana hafa.
Fa kosa, niara-nisafidy ny fiarahamonina mahazatra hiresaka ny fihetseham-po tsy mahazo aina mety hiainan'ny olona iray.
Izany dia mahatonga azy io ho sarotra kokoa ho an'ireo olona manana aretina mitebiteby, aretim-bipolar, PTSD, ary aretina ara-tsaina hafa na tsy fahatomombanana izay manasongadina ny fikajiana.
Mety efa naheno olona nilaza toy izao ianao: 'Fa maninona ianao no voataona?' ho setrin'ny fahatezerana.
Andao jerena ny fizotra tsotra, fa tsy mora, hamantarana, hitarika ary handresy ny trangan-javatra.
1. Te hampiasa kahie na diary ianao.
Ny dingana voalohany dia ny fahazoana kahie na diary. Hevitra tsara kokoa hatrany ny manoratra amin'ny tanana rehefa manoratra ho an'ny fahasalamana ara-tsaina ianao satria manome vokatra fitsaboana tsara kokoa noho ny fanoratany.
Ny hetsika fanoratana dia miadana kokoa, izay manome anao fotoana bebe kokoa hieritreretana sy hikirakira ny tena asa ataonao ambarao izay tsapanao ary maninona.
Azo inoana fa hiverina ianao ary hanampy ao amin'ny diarinao rehefa mandeha ny fotoana ary mandamina ny zava-drehetra ianao. Hamarino tsara fa ao amin'ny toerana azo antoka izy io na ny olona tsy manaja ny fiainanao manokana dia tsy hahita izany.
2. Fantaro ny antony mampihetsi-po amin'ny fijerena ireo fotoana misavorovoro amin'ny fiainanao.
Ny toerana tsara indrindra hanombohana fitadiavana fientanam-po dia ny manodidina ny mora mihetsika indrindra, sarotra, ary maharary fotoana amin'ny fiainanao.
Rehefa dinihina tokoa, ny fihetseham-po mifandraika amin'ireo toe-javatra ireo dia matetika avy amin'ny zava-nitranga niainanao.
Rehefa mitantara ny hetsika amin'ny tenanao ianao dia te-hanao fanamarihana momba izay fihetsem-po tsapanao taloha, nandritra ary aorian'ny hetsika.
Io rafitra io ihany dia afaka mihatra amin'ny fitadiavana ireo mitarika aretina ara-tsaina.
3. Fantaro ireo zavatra inoanao na filam-baninao fatratra.
Mamolavola lisitr'ireo zavatra inoanao sy idealyo, avy eo jereo ny hamaliana ny antony ao ambadik'ireo fihetsem-po ireo.
Fa maninona ianao no mino ny zavatra ataonao? Fa maninona no tsapanao ny zavatra ataonao?
Ny valin'ny '' Eny, izany fotsiny no inoako 'dia tena tsy manampy na tadiavinao.
Ny finoana sy ny idealy dia matetika entin'ny fihetsem-po na toe-javatra, toy ny fomba fijery politika novolavolaina tamin'ny fomba niainan'ny olona sy ny fahatsapany ny fiainana.
Ny famoahana ny antony ahatsapanao ny fomba fanaovanao dia hanome anao mazava kokoa amin'ny tontolo ara-pihetseham-ponao sy ny fahitana bebe kokoa amin'ny zavatra manetsika ny fihetsem-ponao.
Ahoana no hifehezana ny fihetsem-ponao amin'ny toe-javatra miantso lohany mahafinaritra
Zavatra 12 tokony hatao rehefa mahatsiaro ho tezitra ianao
Ahoana ny famongorana ny tantara amin'ny fiainanao
Fomba 6 hanatonana ny fiovan'ny toetranao miovaova ny sakaizanao
4. Fantaro ary farito ny finoana kely ara-pihetseham-po izay hazoninao.
Inona no mahasosotra anao? Inona no mitondra fahafaham-po ho anao ? Inona no manelingelina anao? Inona no mitondra fahasambarana ho anao?
Ny fifantohana amin'ity fizarana ity dia ny mamantatra sy mijery ireo fihetseham-po kely kokoa izay manampy anao hanana ny maha-ianao anao mba hahafahanao mamolavola sary mazava sy feno ny tontolo ara-pihetseham-ponao.
Amin'ny fahafantarana ireo singa kely kokoa ireo dia mety ho hitanao fa manampy amin'ny famahanana ny fomba fijerinao ankapobeny sy ny fihetsika mampihetsi-po amin'ny toe-javatra iray izy ireo.
5. Manomboha manontany tena hoe 'maninona' rehefa mahatsapa fihetseham-po mampihetsi-po ianao.
Ny fandinihana mahaliana momba ny zanak'olombelona dia ny olona amin'ny ankapobeny dia mianina amin'ny fahatsapana tsotra izao izay zavatra ezahan'ny ati-doha hampahatsapa azy ireo. Tsy tena mahafantatra na tsy miraharaha ny antony ahatsapany fomba iray izy ireo, fantany fotsiny fa izany no tsapany ary izany dia mihoatra lavitra noho ny mety ho azy ireo.
Ny famantarana ny antony taloha dia hanampy anao hahita azy ireo amin'izao fotoana izao ary hamakivaky azy ireo amin'ny fomba mahomby amin'ny ho avy.
Raha fantatrao fa avy amin'ny lasa dia mandratra anao mafy, dia afaka mahita fomba tsara kokoa hitetezana azy ianao raha miaina izany amin'ny ho avy.
Tsy milaza akory izany fa tokony hanana fomba fisorohana ianao. Misy ny olona handray izany vaovao izany ary hampiasa izany mba hanao izay fara heriny mba hialana amin'ireo zavatra manelingelina na manelingelina azy ireo, saingy fomba fiasa ratsy izany satria afaka manamafy ny fihetsem-po ratsy.
Ny fahaizana mahatsapa ny fihetseham-ponao sy mivezivezy azy ireo dia zava-dehibe, satria tsy hanana safidy hisoroka azy ireo foana ianao.
6. Hamarino tsara fa ny antonyo dia taratry ny zava-misy.
Betsaka ireo mpamorona atiny, haino aman-jery ary tranonkala media sosialy izay mampiasa tahotra sy hatezerana ho toy ny rafitra hitazomana ny mpanatrika haharaka sy hanaraka azy ireo.
Ampiasain'izy ireo ny tahotrao, ny fahatezeranao ary ny tsy fahatokisan-tenanao hampitombo ny olana amin'ny fomba hitazomana anao hiverina hijery ny fampielezam-peo, hamaky ny teniny, na hividy ny vokatr'izy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana fanodinkodinana izay latsaka amin'ny faritra feno fitsipi-pitondrantena.
Misy fomba maro hilazana ny marina arakaraka ny teny izay fidinao. Ny fampisehoana sasany dia manipulative kokoa noho ny hafa.
Ilaina ny manamarina indroa ireo loharano sy fampiasana fanampiny dingana iray amin'ny fisainana kritika hahazoana antoka fa izay fitakiana na fihetsika manentana ny fihetsem-po ao aminao dia tena marina sy marina. Mety ho hitanao fa tsy fanehoana marina ny zava-misy.
Izany dia mety miainga amin'ny zavatra lazain'ny namanao aminao, hatramin'ny meme nozaraina tao amin'ny media sosialy, hatramin'ny fomba fanakianan'ny lehibena anao, ny zavatra lazain'ny vatofantsika anao.
7. Manàna faharetana ary manohiza manitsy ny olana.
Olana lehibe amin'ity fomba ity ny faharetana. Ity tontolo ity dia toerana mihetsika haingana ary tsy dia manam-paharetana intsony ny olona isan'andro.
Mampalahelo fa tsy mandeha amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po izany. Dingana maharitra izay mety maharitra ezaka mandritra ny volana maro na an-taonany maro.
Zavatra tsy maintsy iasanao matetika sy fanazaran-tena ianao mba hanampiana hanala sy hanamaivana ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainana izay mitarika anao.
Ho an'ny olona manana aretina ara-tsaina, ireo ezaka ireo dia mety mila mitranga miaraka amin'ny fitsaboana na fanafody. Tsy afaka mieritreritra ati-doha simika na vatana tsy mahasalama ianao.
8. Misehoa amin'ny tranga mampihetsi-po amin'ny fatra kely.
Midoboka mahitsy amin'ny fandroana mafana ve ianao? Tsy amin'ny ankapobeny.
Fa kosa, miditra amin'ny tongotra iray ianao, mampiditra ilay tongotra hafa, ary milentika miadana ao anaty fandroana mba hanomezana fotoana ny vatanao hanamora ny fiovan'ny maripana.
Ny fiasa amin'ny alàlan'ny antony mampihetsi-po dia mitovy tanteraka.
Raha vantany vao azonao ny zavatra tsapanao, ny antony ahatsapanao azy, ary ny fomba fandanjalanjana azy, dia tianao ny mametraka ny tongotrao ao anaty rano indraindray mba hahafahanao miala sasatra sy mandoto ireo fihetsem-po ireo ka tsy eo intsony ianao fehezin'izy ireo.
Amin'ny maha olona voan'ny Bipolar Disorder sy Major Depression ahy dia ireto no zavatra nianarako sy dingako narahiko tamin'ny famafana ny zavatra mampihetsi-po ahy manokana.
Tsy tiako ny lehilahy, vehivavy, toe-javatra, na aretin-tsaina hanana fahefana hanakorontana ny fandriampahalemako. Marina fa tsy tanjona rehetra na tsy misy izany. Na ny fanovana vitsivitsy aza dia afaka manatsara ny fiadanan-tsainao sy ny kalitaon'ny fiainana.
Aza manahy ny hahatonga azy ho lavorary. Tsy misy manao.
ny vehivavy dia te ho tiavina fotsiny
maninona ry zalahy no misintona rehefa manakaiky izy ireo
izay tokony hatao any an-trano rehefa misy noloahany
ny fomba ahazoana fitiavana bebe kokoa amin'ny sakaizanao